Venezoelà: Mitombo Enintaona Amboniny Indray Ny Vanim-potoana Chávez · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Oktobra 2012 1:16 GMT
Vakio amin'ny teny English, Català, বাংলা, Français, Português, Swahili, Italiano, Español
Taorian'ireo fifidianana notoherina fatratra sy henjana indrindra tato anatin'ny folo taona farany, hanampy enina taona amboniny indray ho an'ny fitantanan'Atoa Hugo Chávez Frías izay efa nanomboka tamin'ny 1999 ny Venezoeliana. Faran'izay nifatrapatratra ny fifamezivezem-baovao tany anaty tambajotra sosialy, indrindra fa ny Twitter, indrindra moa fa tamin'ny fotoana nialoha ny fanambaràna tamin'ny fomba ofisialy ny vokatra.
Adriana (@SombreroRojo) [es] miteny hoe :
@SombreroRojo [es]: Tohizo e! tohizo ny kabarinareo momba ny fiaraha-mientana: tierruos [anarana fanambaniana ireo mahantra mipetraka eny amin'ny tanàna ambany], mpisetrasetra, tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Mbola azontsika atao ny hànana an'i Chavez mandritra ny… 30 taona fanampiny? eny, mora kely mihitsy!
Mandritra izany i MariAzul (@Mariazul84) [es] dia manoratra hoe:
@Mariazul84 [es]: Tahaka izao, miaraka amin'ny dehaka, miaraka amin'ny rokoriko, miaraka amin'ny fizahozahoana sy ny sisa, tsy maintsy manaiky izy ireo fa ny tierruos no mifidy ny filoha ho an'ireo “olona kàtraka”.
Mangataka ny hampitsaharana ny resabe mampiteraka saritaka i @Racksonador [es]:
@Racksonador [es]: Ary mba atsaharo ny filazana fa hisy olona hovonoina na hisy hamono anao ary handeha handositra ny frenena ianao. IZAY ALOHA NO VITA #ElcomandanteSeQueda (Tafatoetra ny kômandy ambony)
Fedosy Santaella (@Fedosy) [es] manoratra hoe:
@Fedosy [es]: Hanohy hanompo ihany i Capriles, hanohy hanoratra ihany aho. Fireneko ny fireneko. Tsy hampietry ahy ho tsy Venezoeliana izany, na tsy ho mpanoratra.
Moraima Guanipa (@haticos) [es] milaza hoe:
@haticos [es]: Ho ekeko ny fandresen'i Hugo Rafael Chávez Frías saingy tsy hitehaka velively ny fomban'ny mpanararaotra, ny mpanosihosy sy mpilalao saim-bahoaka nentina nametrahana azy iny aho.
@upallove [es], mandritra izany, dia maneho ny hadisoam-panantenany tamin'ireo vokatr'izy iny sy ireo fifidianana ho filoham-pirenena tany aloha:
@upallove [es]: Cristina [Fernández de Kirchner] nandresy tany Argentina. Peña Nieto nandresy tao Mexico. Chávez nandresy tao Venezuela. Ny Habadoana nandresy tany Amerika Latina.
Andrea (@DynamiteAndre) manamarika, tahaka ireo maro hafa, ny ahiahiny momba ny fampiasana fitaovam-piadiana mandritra ilay fankalazàna :
@DynamiteAndre: “HO ELA VELONA I CHÁVEZ!” arahan'ny feon-tifitra mifanesy. Tsia, chavista [mpanohana an'i Chávez ] namana. Tsy haharesy lahatra ahy ianareo hoe OK, milamina izao.
Taorian'ny sivana avy amin'ireo fihaonana marobe nitranga nandritra ny alin'ny fidifianana, nisy hevitra iray toa nàka toerana tsikelikely tao anatin'ny adihevitra: ny filàna ny fifankatoavana mifamaly mba hihoarana ireo fisamantsamahan'ny saranga sosialy nisy hatry ny ela, ary ny filàna fandinihan-tena ho an'ny mpisehatra tsirairay avy. Luis Carlos Díaz (@LuisCarlos) [es] dia manipika io filàna io ho toy ny vokatra iray avy amin'ity fifidianana ity :
@LuisCarlos [es]: Manomboka ny fifaninanana hàka ny fankatoavan'ny ankilany.
@LuisCarlos [es]: Nandresy faninefany indray tamin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ny Filoha Chávez ary dia hanana fe-potoam-piasana 1999-2019.
Avy amin'ny aknkolafy mpanohana an'i Chávez, miteny i Gabriel López (@GaboVzla) [es] hoe:
@GaboVzla: Ny fandresena izay efa fantatsika rehetra sahady dia ilàna fisaintsainana lalina, izay azo antoka fa tena hisy. Androany, ndeha isika hankalaza sy hankahery ny demaokrasiantsika.